အဘယ်ကြောင့်ငါ့အကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသံမရှိပါသလော အသံ RESTORE လုပ်ပါ | PCPRO100.INFO - အသံက - 2019
အဘယ်ကြောင့်ငါ့အကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသံမရှိပါသလော အသံက Restoring
ဤဆောင်းပါးတွင်မကွန်ပျူတာသံကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သောရန်အကြောင်းပြချက်များစုစည်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါသည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။ အကြောင်းပြချက်အများစုဟာ, လမ်းဖြင့်, သင်အလွယ်တကူကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ပေးနိုငျပါသညျ! အတူစတင်ကျနော်တို့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်းပြချက်အပေါ်ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါအသံများအကြားခွဲခြားရပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အခြားကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Audio / Video ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်စပီ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြပြီး, အသံသည်ဆိုပါက - ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲမှအများဆုံးဖွယ်ရှိမေးခွန်းများကို (နှင့်ပိုမိုအသေးစိတ်အကြောင်းကိုဖွင့်) ။
1. က Non-အလုပ်လုပ်ကော်လံ (မကြာခဏကြိုးတင်နိုင်သို့မဟုတ်ခြိုးဖကျြ)
2. အသံနုတ် settings ကို
4. အဘယ်သူမျှမကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ Audio / Video
5. ဖွဲ့မှုလွဲမှား နေ. BIOS
6. ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ adware
တခြားအရာအားလုံးထက်ပျက်ကွက်လျှင် 7. , အသံပြန်သွား
ဤသည်လာသောအခါသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသံ setup ကိုနှင့်စပီကာလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာပါ! ပြီးတော့, တစ်ခါတစ်ရံ, သင်သိထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များရှိပါတယ်: ကအသံနှင့်အတူထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပေမယ့်ကဝါယာကြိုးများမေ့လျော့နေသည် ...
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျမှား input ကိုကသူတို့ကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ မိုက်ခရိုဖုန်း, စပီကာ (နားကြပ်): အဆိုပါတကယ်တော့ကွန်ပျူတာ sound card ကိုအပေါ်မျိုးစုံရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် - အများအားဖြင့်, မိုက်ခရိုဖုန်းကို output ပန်းရောင်, နာယကဖုံးလွှမ်းနေသည်။ အဲဒါကိုအာရုံစိုက်! အဖြစ်ကောင်းစွာ, ဒီမှာနားကြပ်ရဲ့ကွန်နက်ရှင်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဆောင်းပါးရဲ့ဤမေးခွန်းကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်ရှိသေး၏။
သင်္ဘောသဖန်း။ စပီကာကိုချိတ်ဆက်ရန် 1. Cord သည်။
တခါတရံကသွင်းအားစုထွက်ဝတ်ဆင်ကြပြီဖြစ်ပျက်, သူတို့ပဲအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ချက်လိုအပ်: ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် re-ထည့်သွင်း။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာမြေမှုန့်ထဲကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်စပီကာမိမိတို့ကိုယ်ကိုအပေါ်ရှိမရှိသတိပြုပါ။ များစွာသော devices များ၏ရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်သင်စပီကာကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြတဲ့သေးငယ်တဲ့ LED ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 2. ဤရွေ့ကားစပီကာ t.k.gorit အစိမ်းရောင် device ကိုအပေါ် LED ပါဝင်သည်။
အဆိုပါစစ်ကြောင်းများအများဆုံးမှအသံအတိုးအကျယ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပါလျှင်စကားမစပ်, သင်ပုံမှန် "ဘွယ်ရာ" နားထောငျနိုငျသညျ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအာရုံစိုက်။ မူလတန်းသဘောသဘာဝနေသော်လည်းအများဆုံးကိစ္စများတွင်, ပြဿနာတွေကိုပဲဒီဖြစ်ကြသည် ...
လုပ်ဖို့ဒုတိယအရာ - စစျဆေးနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ settings တွေနဲ့ OK ကိုလိုလျှင်, သူကအစီအစဉ်တကအနည်းဆုံးအသံ devices တွေကို control panel ထဲကပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ချွတ်အသံနုတ် Windows တွင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူရိုးရှင်းစွာမှာအနည်းဆုံးအသံနုတ်လျှင်ဖြစ်ပါသည် - ကအလွန်ညံ့ဖျင်းကစားကရိုးရှင်းစွာကြားသိသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့က Windows 10 (က Windows 7, 8, အရာအားလုံးတူညီလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်) ဖို့ setting ကို၏ဥပမာတစ်ခုပြပါ။
1), ပု Control Panel ကိုဖွင့်ပါထို့နောက် "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" ကိုသွားပါ။
2) ပွင့်လင်းယင်းနောက် tab ကို (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 3) "အသံ" ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ
3) သင်ကကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုအပါအဝင်အသံကိရိယာ (ဖော်ပြရန်ရန် "အသံ" နားကြပ်) တွင်ရှိသည်။ လိုအပ်သောဒိုင်းနမစ်ခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့် (။ ပုံ။4ကိုကြည့်ပါ) သူတို့ရဲ့ properties ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ စပီကာ4Properties ကို (အသံ)
4) သငျသညျ ( "ယေဘုယျ" ရရှိမည်ဖြစ်သောပထမဦးဆုံး tab ကို) ၌သင်တို့သည်အရာနှစ်ခုမှာအနီးကပ်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်:
-? လျှင်ကိရိယာသတ်မှတ်လျှင်မရ - သင်ကတစ်ဦးကားမောင်းသူလိုအပ်ပါတယ်။ မရလျှင်, ကွန်ပျူတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန် tools တွေကိုတစ်ဦးကိုသုံး tool ကိုတစ်ချိန်တည်းဘယ်မှာရှိသနည်းဟုဒရိုင်ဘာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အကြံပြုတော်မူမည်
- ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေကိုကြည့်လျက်, စက်ပစ္စည်းတွင်လှည့်လျှင်။ မပေးလိုလျှင် - သင်ကဖွင့်တာသေချာပါစေ။
သင်္ဘောသဖန်း။ စပီကာများ 5. Properties ကို (နားကြပ်)
5) window ကိုပိတ်ပြီးမရှိရင်, ထိုပန်းရံ "အဆင့်ဆင့်" သို့သွားပါ။ ထက်ပိုမို 80-90% ဖြစ်သင့်သည်, ထိုအသံအတိုးအကျယ်အဆင့်မှာကြည့်ပါ။ အနည်းဆုံးကာလပတ်လုံးအသင် (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 6) အသံကပေါ်လာ, ပြီးတော့ညှိကြဘူးအဖြစ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 6. Volume ကို Levels
6) "အဆင့်မြင့်" tab ကိုခုနှစ်တွင်အသံစစျဆေးဖို့အထူးခလုတ်ကိုလည်းမရှိ - သင်ကနှိပ်တဲ့အခါသင်တိုတောင်းတဲ့သီချင်းဆို (5-6 စက္ကန့်) ကစား start သင့်ပါတယ် .. သင်ကမကြားဘူးလျှင်, settings ကိုကယ်တင်, လာမယ့်ပစ္စည်းကိုမှအပေါ်ကိုရွှေ့။
သင်္ဘောသဖန်း။ 7. အသံစစ်ဆေးမှု
7) သင်, လမ်းဖြင့်, တစ်ဖန်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းက "Volume ကိုချိန်ညှိမှုများ" "Control Panel ကို / ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" နှင့်ပွင့်လင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ 8 ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 8. volume ကို Adjust
ဤတွင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နိမ့်ဆုံးဒီဇင်ဘာမှအသံရှိမရှိ။ စကားမစပ်, သငျသညျ, ဥပမာအားဖြင့် Firefox browser ကိုအသံကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ပင်ဤတဘ်အတွက်အချို့သောအမျိုးအစားအသံကဆင်းလှည့်နိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 9. အစီအစဉ်များ၏အသံအတိုးအကျယ်
(နာရီအနီး) အနိမ့်ညာဖက်ထောင့်မှာတူညီတဲ့အသံအတိုးအကျယ် setting ကိုရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အသံအတိုးအကျယ်ရှိရှိမရှိ Check နှင့်စပီကာအောက်ကပုံထဲက၌ရှိသကဲ့သို့, ပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိ။ ရှိသမျှကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, သင်3step ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 10. ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသံအတိုးအကျယ်ညှိ။
အရေးကြီး! Windows ကို Setting ကိုအပြင်မှာစပီကာသူတို့ကိုယ်သူတို့၏အသံအတိုးအကျယ်အာရုံစိုက်ဖို့သေချာပါစေ။ နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ထိန်းချုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်!
အများစုကတော့သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဗီဒီယိုကဒ်နှင့်သံကိုကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိခြင်းကွန်ပျူတာ ... , အသံ၏ပွနျလညျထူထောငျတှငျတတိယခြေလှမ်း - ယာဉ်မောင်း check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျယခင်ခြေလှမ်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမည်ထိုပြဿနာကို ...
သူတို့နှင့်အတူအားလုံးနိုင်ရန်အတွက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်, Device Manager ကိုသွားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Control Panel ကိုဖွင့်လှစ်, ထို့နောက် tab ကို "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" ဖွင့်လှစ်, အဲဒီနောက် Device Manager ကိုစတင်ပါ။ ဒါကအမြန်ဆုံးလမ်း (။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ 11) ဖြစ်ပါသည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 11. ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ
Device Manager ထဲမှာကျနော်တို့ tab ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည် "အသံ, ဗီဒီယိုနှင့်ဂိမ်းစက်များ။ " သငျသညျအသံကဒ်ရှိသည်, ကချိတ်ဆက်နေသည်ဆိုပါက: ဒီမှာပြသရပါမည်။
1) device ကိုသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ပြသခြင်းနှင့်အဝါရောင် (သို့မဟုတ်အနီရောင်အာမေဍိတ်အမှတ်အသား lit) အကယ်. - ဒါကြောင့်ကားမောင်းသူမှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ် installed မထားဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်လက်ျာကားမောင်းသူဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ စကားမစပ်ငါအစီအစဉ်ကိုဧဝရက်တောင်ထိပ်ကိုသုံးပါလို - မသာကဒ်ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကိုပြသပေမယ့်လည်းရှိရာလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သူမ၏ပြောပြလိမ့်မယ်။
ယာဉ်မောင်းကို update နှင့်အတည်ပြုရန်တစ်ဦးကအကြီးလမ်း - သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာရှိသမျှ hardware အတွက်ယာဉ်မောင်းများအတွက် Auto-update ကိုနဲ့ search တစ်ခု utility ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါသည်: Highly အကြံပြု!
သငျသညျအသံကဒ်အများရှိသော်လည်း, Windows အတွက်ကြောင့်မမြင်ရနိုင်လျှင် 2) ... ဒါဟာဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာ device ကိုစနစ်တကျမဟုတျကွောငျးဖြစ်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကဆိုးဆိုးရွားရွားချိတ်ဆက်ရှိသည်။ သငျသညျ built-in ကြဘူးလျှင် sound card ကိုငါ slot ကထွက်မှုတ်, မြေမှုန့်ထဲကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကိုစတင်အကြံပြုပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပြဿနာကကွန်ပျူတာ၏ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူပါဆုံးဖွယ်ရှိသည် (သို့မဟုတ်ကြောင့် Bos စင်တီမီတာ၏ BIOS ကို device အတွက်ပိတ်ထားသည်။ အောက်တွင်ဆောင်းပါးအတွက်) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 12. Device Manager
အဟောင်းသို့မဟုတ်အသစ်များ: ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်း upgrade ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏ developer များကွန်ပျူတာအပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်သော configurations မြော်နိုင်ကြမဟုတ်ကသင့် system ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူမည်သည့်ယာဉ်မောင်းပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။
သင့်ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့အခါမှာသငျသညျအသံများ (ဥပမာ, Windows ကိုနှုတျဆကျနားထောငျ) နှငျ့မဆိုဗွီဒီယို (စတာတွေက AVI, MP4, DivX, WMV,) ၏ပါဝင်မှုများအတွက် - ပြဿနာကိုဗီဒီယိုကစားသမား, ဒါမှမဟုတ်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်သူ့ဟာသူအတွက်ဖြစ်စေဖြစ်ပါသည် (ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ယိုယွင်းသည်အခြားဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစား) ။
1) ဗွီဒီယိုကိုကစားသမားတွေနဲ့ပြဿနာဆိုပါက - ငါကတခြားတပ်ဆင်ရန်နှင့်ကြိုးစားကြရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, KMP Player ကို - အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုပေးသည်။ ဒါဟာပြီးသား built နှင့် optimized မိမိအလုပ်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, ဒါကြောင့်သူကအများဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
2) ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုပါလျှင် - အရာနှစ်ခုလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ ပထမဦးဆုံး - လုံးဝစနစ်ကနေသူတို့ရဲ့အဟောင်းကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများဖယ်ရှားပစ်ရန်။
နှင့်ဒုတိယအကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများတစ်ဦးပြည့်စုံတစ်စုံတည်ထောင်ရန် - K-Lite ကို codec Pack ကို။ ပထမဦးစွာဒီအထုပ်ကိုကြီးစွာသောကစားသမားများနှင့်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း Media Player ကိုဖြစ်ပြီး, ဒုတိယအလုံးကိုလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်ကို formats ပူဇော်သမျှသောလူကြိုက်အများဆုံးကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, installed လိမ့်မည်။
ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ K-Lite ကို codec Pack ကိုနှင့်၎င်းတို့၏လျော်သောတပ်ဆင်ခနှင့် ပတ်သက်. အပိုဒ်:
စကားမစပ်ကြောင့်သူတို့ကို install လုပ်လျက်, မှန်ကန်စွာဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကိုတင်ထားရန်သာအရေးကြီးပါသည် ပြည့်စုံအစုံ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, "Stuff အများကြီး" (- ပဲအထက် link ကိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအကြောင်းကိုဆောင်းပါး၌ဤပို) က mode ကို select လုပ်ပါ, တပ်ဆင်ခြင်းစဉ်အတွင်းပြည့်စုံတစ်စုံကို download လုပ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 13. ပြင်ဆင်မှုအားကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ
သင်တစ်ဦး built-in ကြလျှင် sound card ကို - ထို BIOS setup ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ setting ကိုအသံ device ကိုပိတ်ထားလျှင် - သင်က Windows တွင်အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, များသောအားဖြင့်ပြဿနာကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရှားပါးသည် အဆိုပါ BIOS ထဲမှာ default settings ကို - sound card ကို enabled ။
အဆိုပါ kompyutera.Esli သွားကြဖို့မရတဲ့အခါသင်ကပိုမိုနီးကပ်စွာပေါ်တွင်လှည့်ခဲ့ကြတခါအဲဒီ settings, စာနယ်ဇင်း F2 သို့မဟုတ် Del key ကိုကို (ကို PC ပေါ် မူတည်. ) ဝင်ရောက်ဖို့, ကွန်ပျူတာတင် screen ပေါ်မှာကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အများအားဖြင့်, ကအမြဲတမ်း BIOS ထဲဝငျဖို့ခလုတ်ကိုရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင်ဥပမာ, ကွန်ပျူတာ Acer ကုမ္ပဏီတွေဖွင့် - အောက်ခြေမှာ DEL ခလုတ်ကိုတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား - ထို BIOS ထဲဝငျဖို့ (သင်္ဘောသဖန်းတွေ့မြင် 14 ။ ) ။
သငျသညျအခက်အခဲများရှိပါကငါ BIOS ထဲသို့ဝငျဖို့ဘယ်လိုအပေါ်မှာငါ့ဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု:
သင်္ဘောသဖန်း။ 14 BIOS ထဲမှာ input ကိုခလုတ်
, BIOS ထဲမှာသင်စကားလုံး "Integrated" ပါရှိသည်တစ်ဦး string ကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 15. ပေါင်းစည်း Peripheral
အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်သင်သည်သင်၏အသံစက်ပစ္စည်းရှာဖွေကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေါ်မှာလှည့်လျှင်။ ပုံ 16 (အောက်တွင်) သင်အခြားတစ်ဖက်တွင်မတ်တပ်ရပ်လျှင် "မသန်စွမ်း" ဖြစ်လိမ့်မည်, enabled ဖြစ်ပါတယ် - "Enabled" သို့မဟုတ် "အော်တို" ကိုပြောင်းလဲ။
သင်္ဘောသဖန်း။ AC97 အသံဖွင့် 16
သငျသညျဖြစ်လျှင်, BIOS ကို exit settings ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
ဘယ်သူမှသူတို့သင်ပေးဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသိနိုင်အောင်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့မျိုးစိတ် ... ဗိုင်းရပ်စ်မပါဘဲအဘယ်မှာရှိကြသနည်း။
ပထမဦးစွာတစ်ဖွဲ့လုံးကကွန်ပျူတာကိုအာရုံစိုက်။ အဆငျ့မြေပြင်ပေါ်တွင်မကြာခဏ Hang ရှိပါတယ်ရှိလျှင်, antivirus ကိုထွက်လာပါတယ်, "ဘရိတ်" ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်အမှန်တကယ်ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်, တဦးတည်းကန်ထရိုက်။
အကောင်းဆုံး option ကိုအဆင့်မြှင့် databases ကိုနှင့်အတူအချို့သောခေတ်သစ် Antivirus ကိုအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်အဘို့သင့်ကွန်ပျူတာကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အထက်ပါဆောင်းပါးများကိုတ, ငါ 2016 ရဲ့အစမှာအကောင်းဆုံးကိုပေးတော်မူ၏။ :
စကားမစပ်, ကောင်းသောရလဒ်များကို antivirus ကို DrWeb CureIt ပြ, ကပင် installed မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးစစ်ဆေးပါ။
ဒုတိယအချက်မှာငါအရေးပေါ် Boot တက် disk ဒါမှမဟုတ် flash drive (Live CD ဒါခေါ်) ကို အသုံးပြု. သင်၏ PC scan လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်။ သူကားအဘယ်သူကြုံတွေ့တစ်ခါမျှဆို, သင် antivirus ကိုရှိပါတယ်တဲ့ CD ကို (ချောင်းကို) အဆင်သင့် operating system ကို load ချင်ပါတယ်။ စကားမစပ်ကြောင့်သင်တို့အဘို့ဖြစ်နိုင်နှင့်အသံကပေါ်လာပါသည်။ ဒါကြောင့်ပါလျှင် - ထို့နောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိသငျသညျကို Windows နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်နှင့်ကြောင့် reinstall လုပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ ...
1) သင်ကအသံများမတိုင်မီ အကယ်. ခဲ့ပေမယ့်ယခုလည်းမရှိ - ဖြစ်ကောင်းသင်တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲပဋိပက္ခဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းမည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ကားမောင်းသူ installed ပါပြီ။ ဒီ option ကိုစနစ်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားရန်အဘို့အဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်။
2) အခြားအသံကကဒ်သို့မဟုတ်အခြားစပီကာလည်းမရှိဆိုရင်တော့ disabled ကြောင့်အဟောင်းတွေကိရိယာများပေါ်တွင်စနစ်ကနေကားမောင်းသူကိုဖယ်ရှားနေစဉ်) (ကိုသင့်ကွန်ပျူတာကသူတို့ကိုချိတ်ဆက်သူတို့အပေါ်မှာထပ်မောင်းသူ reinstall ကြိုးစားပါ။
အားလုံးအထက်ပါအဆင့်များမကူညီဘူးဆိုရင်သင်ကအခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးနောက်ထပ် Windows7reinstall နိုင်ပါတယ်သင်သည်ရုတ်တရက်အသံကပေါ်လာလျှင် 3), စနစ်ချက်ချင်းအသံကားမောင်းသူတည်ထောင်ရန်နှင့် - ဂရုတစိုက်တစ်ဦးချင်းစီကို install အစီအစဉ်ကိုအပြီးသူ့ကိုကြည့်ရှုပါ။ အများစုမှာဖွယ်ရှိသငျသညျကိုချက်ချင်းတရားခံသတိထားမိပါလိမ့်မယ်: ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်ယခင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ program ကို ...
4) တနည်းအားဖြင့်အစားအစားနားကြပ်ရဲ့နားကြပ်စပီကာ (ထည့်များ - ကော်လံ) ။ သင်တစ်ဦးအထူးကုတိုင်ပင်ဖို့လိုပေမည် ...
https://termotools.com my.termotools.com © အသံက 2019